कांग्रेस महाधिवेशन : देउवा-निधि आमुनेसामुन्ने « AayoMail
कांग्रेस महाधिवेशन : देउवा-निधि आमुनेसामुन्ने
2021,24 June, 9:21 am
नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाटै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा चुनाव लड्ने तयारी अगाडि बढाएपछि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति तातिएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा १४ औं अधिवेशनमा दोहरिन ‘लबिङ’ सुरू गरिरहेका बेला उनी निकट निधिले पनि तयारी सुरू गरेपछि कांग्रेसको राजनीति तातिएको हो।
देउवाले आफू सभापतिमा लड्न लागेको भन्दै सातै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भेटेर बढीभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि जुटाउन निर्देशन दिइसकेका छन्। अर्कोतर्फ निधिले पनि भेटलाई तीव्रता दिँदै नेताहरूसँगको छलफललाई अगाडि बढाइसकेका छन्।
उनले केही दिनअघि पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र महामन्त्री शशांक कोइरालालाई भेटेका थिए भने संस्थापनइतर युवा नेताहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए।
सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर देउवालाई चुनौती दिइरहेका निधिले युवा नेताहरूसँगको छलफलमा ‘आफ्नै टीमको मात्रै भोटले देउवाजी जित्ने अवस्था छैन। सभापति हुन चाहनेले सबैतिरबाट भोट लिन सक्नुपर्छ। म तपाईंहरूसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको छु’ भनेका थिए।
१३ औं महाधिवेशनपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका देउवाले आफैं दोहरिने प्रस्ताव गरेपछि निधि कस्सिएका हुन्। भेलामा युवा नेताहरूले निधि पछाडि हट्ने हुन कि भन्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका थिए। तर, निधिले अगाडि बढिसकेको बताउँदै अब कुनैपनि हालतमा ब्याक हुने स्थिति नरहेको प्रष्ट्याएका थिए।
देश र पार्टीको भविष्यका लागि दोस्रो पुस्ताबाट सभापति चयन गरिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको निधि बताउँदै आएका छन्। पार्टीलाई अगाडि बढाउन नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा रहेका युवा नेताहरूले निधिको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
‘उहाँको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। कुराकानीको सुरूवात भएको छ, थप छलफल हुन्छ,’ नेता प्रदीप पौडेलले भने। दोस्रो पुस्तामा पार्टीको नेतृत्व जानुपर्ने विषयमा सबैको सहमति रहेको उनले बताए।
नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने युवा नेताको चाहनाकै बीच निधिले सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि देउवालाई समस्या पर्नसक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ।
केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ पार्टीभित्र युवाहरूले रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण खाजेको बताउँछन्।
२०३६ सालमा वीपी कोइरालाले उनको (निधि) को क्षमता देखेर नै नेविसंघको नेतृत्व दिएको स्मरण गर्दै गुरुङ १४ औं महाधिवेशनमा निधिलाई सभापतिमा अघि सार्ने उपयुक्त समय आएको बताए।
‘१५ औं महाधिवेशनका लागि तपाईंहरू नसोचे हुन्छ। यो अन्तिमपटक हो,’ गुरुङले बैठकमा भनेका थिए,‘अहिले तपाईंहरूको पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्छ। तपाईंहरूमध्ये एकजना अगाडि आउनुस्।’
दोस्रो पुस्ताबाट एकजना मात्रै सभापतिको उम्मेदवार बनेको अवस्थामा पार्टीभित्र एकताको महाधिवेशनको सन्देश जाने युवा नेताहरूको भनाइ थियो।
‘निधिलाई सभापतिमा अघि सार्ने उपयुक्त समय आएको छ,’ गुरूङले भनेका थिए,‘मधेशमा कमजोर बन्दै गएको कांग्रेसलाई माथि उकास्नपनि उहाँले उम्मेदवारी दिनुपर्छ। तर, दोस्रो पुस्ता सहमति बनाएर आउनु पर्यो।’
अडानमा कायम रहलान् निधि?
सभापति देउवासँग निधिको सम्बन्ध पुरानो छ। नेविसंघको राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि देउवा र निधिको सहयात्रा हुँदै आएको छ।
कांग्रेस विभाजन भएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सभापति देउवा बनेका बेलापनि निधि उनीसँगै बसिरहे।
वर्षौंदेखिको दुई नेताबीचको संगत १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर चिसिएको विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ देउवासँगको पुराना संगतका कारण आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिने आफ्नो अडानमा निधि कायम रलान् त? भन्ने आशंकापनि नउब्जिएको होइन। खासगरेर कांग्रेस वृत्तभित्रै।
विभिन्नखाले अड्कल भइरहेपनि केन्द्रीय सदस्य गुरुङ भने निधि चुनाव लड्ने पक्का रहेको आफूले अनुभव गरेको बताउँछन्।
‘उहाँले डेढ वर्षअघि नै सभापतिसँग सहयोग माग्नु भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘शशांक, प्रकाशमानलगायतका नेताहरूसँग पहिलेपनि छलफल गरिसक्नु भएको छ। उहाँ चुनाव लड्नुहुन्छ, निश्चित जस्तै देखिन्छ।’
उपसभापति निधिपनि १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा लड्ने निर्णयबाट ब्याक हुने कुरा नरहेको बताउँछन्। यसपटक नलडे १५ औं महाधिवेशनमा आफूले दाबी गर्ने औचित्यपनि नरहने भएकोले कुनैपनि हालतमा ब्याक नहुने उनले बताए।
आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिँदा देउवाको साथ र समर्थन पाउने उनको विश्वास छ।
‘उहाँसँगको जुन लामो संगत छ त्यसै हिसाबले मैले सहयोग र साथ खोजेको छु,’ निधि भन्छन्, ‘अहिले समयपनि बाँकी छ। मलाई विश्वास छ उहाँले समर्थन र सहयोग गर्नुहुन्छ।’
गत शनिबार प्रदेश २ का केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलमा आफू सभापतिमा लड्ने तयारी गरिरहेको निधिले सुनाएका थिए। निधिले ‘मलाई सभापतिमा सहयोग गर्नुस्, तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मेरो सहयोग रहन्छ’ देउवालाई भनेका थिए।
शनिबारको त्यो संवादपछि निधिले देउवालाई धोका दिएको अड्कलबाजी सुरू भएको छ। तर, निधि आफूले देउवालाई धोका नदिएको दाबी गर्छन्।
‘मैले उहाँलाई गएको साउन २९ गते उहाँको निवासमै पुगेर सभापतिमा लड्छु भनेर सुनाइसकेको छु। शेरबहादुरजीलाई छोडेको पनि होइन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग नै गरिरहेको छु। १४ औं महाधिवेशनमा उहाँले सहयोग गर्नुपर्यो मेरो चाहना छ।’